Kukhalwa 'ngendelelo' kaMgiliji - Ilanga News
Home Izindaba Kukhalwa ‘ngendelelo’ kaMgiliji
Kukhalwa ‘ngendelelo’ kaMgiliji
Usola indlunkulu ngokudlala ipolitiki ethi akaliboni iphutha kwakwenzile
UMDIDIYELI wamabutho kaZulu, uMnu Zihogo “Mgiliji” Nhleko.
UKHWELE wadilika eNdlunkulu kaZulu ethi mayihlukane naye phansi, uMnu Zihogo “Mgiliji” Nhleko, ongumkhuzi wamabutho eSilo, okuqubuke imvunge ngokubonakala kwakhe eNkandla namabutho ngoMgqibelo beyokweseka uMnu Jacob Zuma. Sekuwumlando ukuthi uMnu Zuma wagwetshwa yiNkantolo yoMthethosisekelo izinyanga eziwu-15 ebhadla ejele ngokude-lela umyalelo wayo.
Nokho ushaye ingwiji-khwebu, wacela ukuba lubuyekezwe udaba lwakhe, okulindele-ke ukuba luhlale mhla ka-12 kwe-phezulu.
UMnu Nhleko – ogqame ngesikhathi kukhothame iSilo sikaZulu, uZwelithini kaBhekuzulu mhla ka-12 ku-Ndasa (March) – ubhodla umlilo nje, uNdunankulu kaZulu, iNkosi Mangosuthu Buthelezi, ukhiphe isitatimende emuva kwezinkulumo nendida kwa-baningi ngokubonakala kwamabutho kaZulu eNkandla.
INkosi Buthelezi ithe iNdlunkulu kaZulu neSilo uMisuzulu baya-ziqhelelanisa nesenzo sikaMnu Nhleko, yathi ukwenza kwakhe kuyindelelo isibili. Ithe lokhu akwenzile akazange akuthunywe yindlunkulu futhi akabikelanga muntu ngakho.
“Ngokwesibili uMnu Nhleko egcwaneka. Nangesikhathi kugezwa izimpahla zeSilo uZwelithini kaBhekuzulu, savumelana nendlu-nkulu ukuthi umcimbi wokuyozi-ngela mawuhlehliswe ngoba iSilo uMisuzulu sasingaphilile, wathi ngeke aye, kodwa waqhubeka engavunyelwanga wumndeni.
“Kwathi uma abanye abantu bembuza ukuthi kungani ebona-kale emcimbini wokuzingela ekubeni iSilo singekho kuwona, wathi ngokwazi kwakhe iSilo kasikaqokwa,” kusho iNkosi Buthelezi.
Ithe ithunywe yiSilo ukucacisa ukuthi indlunkulu kayihlangene nokwenziwe nguMnu Nhleko eNkandla futhi akekho obemthumile.
UMnu Nhleko utshele ILANGA ukuthi akazange aye namabutho eNkandla,
ubehambe nezinduna ezinta-thu zasoNdini. Uthe akayiboni inkinga kuyona yonke le nto ngoba noMnu Zuma uyibutho. Utshele ILANGA ukuthi indlunkulu idlala ipolitiki.
“Ngifice amabutho eNkandla, bekumele uma ngiwafica bese ngiyazikhetha kuwona? Uma befuna ukungehlisa kulesi sikhundla, mabangehlise, vele kangisiholeli. Mina le mvunulo ebengiyigqokile ngeyami, angiyithengelwanga yindlunkulu. Ngokwazi kwami uZuma uyibutho naye ngoba zikhona nezithombe zakhe ezindala esemabuthweni,” kusho yena.
Uthi akukapheli ngisho inyanga ethethiswe yiNkosi Buthelezi ngokuya kwakhe esigodlweni seSilo KwaKhakhethomthandayo wa-yozingela njengoba kwakuphu-nywe inqina, kugezwa izinto zeSilo uZwelithini.
Okhulumela iNdlunkulu kaZulu, uMntwana uThulani, uthe indlela okwenzeke ngayo, kubukeke
sengathi uMnu Nhleko ubethu-nywe yindlunkulu.
“Amabutho awubuso bukaZulu, ngakho-ke kawukwazi ukuthwala izidlokolo nembatha lengwe emcimbini onje. Kungani indlu-nkulu kumele ithule, ibukele ku-dlalwa ngemvunulo?
“Ngiyaxakeka ukuthi kungani abantu bengabukeli kuMnu Zuma indlela agqoka ngayo. Uma eya ezintweni zepolitiki uyazi ukuthi kumele agqoke kanjani, uma eya emkhosini kaZulu uyazi ukuthi nakhona ugqoka kanjani.
“UMnu Zuma unayo imvunulo enhle kabi, kodwa akayigqoki noma yikuphi noma yikanjani. Kasiphikisani nokuya kukaMnu Nhleko eyokweseka, kodwa ukuvunula kwakhe laphaya, kwakha esinye isithombe njengomuntu ophambili ekuholeni amabutho,” kusho uMntwana Thulani.
Previous articleUZuma uthi akayi ezikhindini
Next article‘IChiefs mayixolise inhliziyo ngeCaf’